Samachar Batika || News from Nepal » धन लाभ हुने यी संकेतहरु जानिराख्नुहोस
धन लाभ हुने यी संकेतहरु जानिराख्नुहोस
जीवनमा घट्न विभिन्न घ’टनाक्रमहरुबाट विभिन्न संकेतबाट शुभ हँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यस्ता संकेतले भविष्यमा हुने घ’टनाले तपाइँलाई राम्रो गर्छन् कि नराम्रो भन्ने थाहा दिन्छन् । धन प्राप्तिका लागि कस्ता संकेत शुभ ?
९ कतै जाँदा लोखर्केले बाटो का’ट्यो भने पैसा हात पर्न सक्छ ।
१० सपनामा फूल ना’स गरेको देख्नु भो भने यसले पनि धन प्राप्तिको संकेत गर्छ ।
११ सपनामा मु’त्र, वी’र्य, वा दि’शा देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्छ ।
१४, सपनामा कुनै निर्दोष ब्यक्तिले मु’द्धाबाट सफाइ पाएको देख्नु भो भने धन प्राप्त हुन सक्छ । सपनामा तपाइँको छातीमा कसैले चलाएको वा कन्याएको देख्नु भो भने पनि धन हात लाग्ने संकेत हो ।१५ विहान शंखको आवाज सुनिए पनि लाभ हुने मान्यता रहेको छ ।
जीवनमा घट्न विभिन्न घ’टनाक्रमहरुबाट विभिन्न संकेतबाट शुभ हँदैछ कि अशुभ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यस्ता संकेतले भविष्यमा हुने घ’टनाले तपाइँलाई राम्रो गर्छन् कि नराम्रो भन्ने थाहा दिन्छन् । धन प्राप्तिका लागि कस्ता संकेत शुभ ? जस्को केही जानकारी माथी दिईसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०१:१९